PSJTV | म डा. केसी होईन
मेरो चाहना डा. केसीसंग मिल्नु संयोग होईन, माफिया राजको परिणाम हो
सोमबार, ३२ असार २०७५ पिएसजे टिभी
सामाजिक सञ्जालले बेला बेला मनमा अथलपुथल ल्याईदिन्छ । विचारको भेल नै चलाउछ । हजारौं भेल मस्तिष्कमा कैद हुन्छन । कतै निकास खोज्न सक्दैनन । केही भेल सतहबाट त केही पिंध नै फ़ुटाएर बाहिर निस्कन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा डा. केसी बारेमा कैयन कुरा छन्, समर्थन, बिरोध र तथस्टताका । डा. केसीको समर्थन र बिरोध कसले गर्छ ? किन गर्छ ? आज यहि विषयमा मन्थन गर्ने जर्मको छ मेरो ।
म डा. केसी होईन, मेरो र्शिषक नै यहि हो । म उनको समर्थन पनि गर्दिन र बिरोध पनि । यसो भनिरहदाँ म चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त भ्रस्टाचार र माफियातन्त्र मेरो आँखाले नदेखेको होईन । म भ्रस्टाचार र माफियातन्त्रको बिरोधमा छु । डा. केसीको समर्थनमा होईन । यस्तो भन्दा मलाई गर्व पनि छैन न त हिनताबोध नै । किनकी म नेपाली नागरिक मात्र हुँ अनि म बस्तुनिष्ठ भएर सोच्ने सामर्थ राख्छु । त्यसैले म डा. केसी होईन ।
डा. केसी को हुन, उनले के गरे र किन गरे जस्ता प्रस्न मेरो मस्तिष्कमा पनि आउछ । उनी बेथेति विरुद्ध दर्जनौपटक अनसन गरे । अहिले पनि अनसन मै छन् । उनको अनसन पनि मेरो चासोको विषय होईन । मेरो चासोको विषय हो चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त भ्रस्टाचार र माफियातन्त्र । मेरो अर्को चासो हो, भ्रस्टाचार र माफियातन्त्र विरुद्ध समाजिक सञ्जाल, सडक र सदनमा उठेका आवाज । ति आवाजका पिता भएको नाताले मात्र यो लेखसंग डा. केसीको सम्वन्ध छ ।मात्र विषयवस्तुको नाता ।
अब विषयवस्तु तिर लागौ । के हामीलाई डाक्टर नचाहिने हो ? किन मेडिकल कलेजको बिरोध हुदैछ ? यो गम्भीर प्रस्न हो अनि रहस्य पनि यहि छ । रहस्यका बारेमा बिस्तारै कुरा गरुला, अहिले तथ्यगत कुरा गरु । किन सबै अस्पताल मेडिकल कलेज राख्न चाहन्छन् ? यस्को उत्तर सिधा रातो मार्सीको भोजसंग जोडिएको छ । नीजि कलेजमा एमबिबिएस पढन एक करोडबढी लाग्छ । यसमा अदृश्यरुपमा पाईने डोनसन रकम लेखाजोखा छैन । एकसय विद्यार्थी भर्ना गर्दा केडिकल कलेजले एक अर्बभन्दा बढी बकाउछन् । कलेज पढने विद्यार्थीले डाक्टरको आवश्यक जनशक्तिको आधा शक्ति पुरा गर्छ । खर्चमा बचत । मेडिकल कलेजको मालिक भएर पुस्त कमाउन पाईने भएकोले मेडिकलमाफिया बेला न कुबेला, ठाउ न बेठाउ मेडिकल कलेज स्थापना होस भन्ने चाहन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१० को प्रतिवेदन हेर्ने हो भने, नेपाल विगत चार दशकमा डाक्टर, नर्स र अन्य स्वाथ्यकर्मीको संख्या निकै बढेको देश हो । तर, यो संख्या प्रयाप्त छैन । प्रतिवेदन पनि त्यहि भन्छ । हामी हाँ स्वास्थ्यकर्मीृको अभाव कहाँ छ ? हामी सबैलाई थाहा छ, दुर्गम जिल्लामा, गाँउमा । जहाँ अस्पताल छ डाक्टर छैनन, नर्स छैनन । यहि तथ्यलाई (केदारभक्त) माथेमा आयोगले पनि उजागर गरेको छ । काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने । यसको अर्थ हो चिकित्सा शिक्षालाई केन्द्रिकृत नगराउने । अर्को अर्थ हो मलुकलाई र्दीर्घकालसम्म चाहिने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या यकिन गरी मेडिकल शिक्षा उपलव्ध गराउने ।
यहाँ निर डा. केसीको भावनाको कुरा पनि आउछ । उनी पनि त्यहि भन्दैछन् जुन माथेमा आयोगले भने छ, मेडिकल शिक्षा विकेन्द्रित हुनु पर्यो, माफियाको हातमा जानु भएन, देशमा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता र परिपूर्ति सन्तुलित हुनु पर्यो । उनको सिधा माग हो, डाक्टर नर्स शहरमा मात्र होईन गाँउमा पनि हुनु पर्यो, काठमाडौं मात्र होईन जुम्लामा डोल्पामा पनि दक्ष स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्यो । के यि माग नाजायज हुन ? सरकारले आफैले गठन गरेको आयोगले समेत यही सुझाव दिएको छ ।
अब करोडौं लगानी गरेर एमबिबिएस एमडी पढेका डाक्टर गाँउ गएरु सेवा गर्लान ? साधारण अर्थशास्त्र बुझ्नेलाई थाहा छ, गर्दैनन् । उनीहरुलाई ४० हजारको तलव आँखा लाग्दैन । यो तलवले उनीहरुको लगानी उठन नै २० वर्ष लाग्छ । गाँउमा न क्लिनिक चल्छ न नर्सिडहोम । अनि डाक्टर किन जान्थे दुर्गममा, गाँउमा । त्यसैले मेडिकल शिक्षा सस्तो हुनुपर्छ । सस्तोमा मेडिकल शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो । स्पस्ट नीति नीति नियम बनाएर कम्तिमा ३/४ वर्ष दुर्गम गाँउमा सेवा गर्ने वातावरण जबसम्म सरकारले बनाउदैन तबसम्म गाँउमा स्वस्थ्य सेवा पुग्न सक्दैन । यति थाहा पाउन न धेरै अध्ययन गनुपर्छ न त विश्लेषणको विशेष क्षमता नै चाहिन्छ । डा. केसीको विचार पनि यहि हो । डा.
केसीले पनि आम जनताले उठाउने यहि आवाज उठाएका हुन । मेडिकल कजेजका (देखिएका) मालिकको पृष्ठभुमी हेर्दा उनीहरु मालिक हुने क्षमता र योग्यता छ (?) भन्ने प्रस्न तडकारो रुपमा उभिन्छ । एउटा माओवादी लडाकुले अस्पताल स्थापना गर्यो र मेडिकल कलेज बनाउन चाहन्छ । अर्को गिट्टी बन तस्करको पनि त्यहि चाहना छ । पैसा भएपछि मेडिकल कजेज नै किन ? अनि राजधानी मै किन? मुख्य शहर मै किन ? बाजुरा, आछाम, जुम्ला, डोल्पाका मानिससंग त्यहाँ कस्तो स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउने भन्ने स्पस्ट मार्गचित्र हुनसक्छ । अवश्य होला । यहाँ जनताको आवाज कसले सुनेको छ र ? दुई तिहाई बहुमतमा मैमत्त छ सरकार । राजनीतिक पार्टीको भरौटे नभएर जुन सुकै नेपालीले वस्तुस्थितीलाई विचार गरे उसको मन मस्तिस्कमा आउने विचार यहि हो । बाजुरा, आछाम, जुम्ला, डोल्पाका मानिससंग त्यहाँ कस्तो स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउने भन्ने स्पस्ट मार्गचित्र हुनसक्छ । अवश्य होला । यहाँ जनताको आवाज कसले सुनेको छ र ? दुई तिहाई बहुमतमा मैमत्त छ सरकार ।
अब समाजिक सञ्जालको कुरा गरु । समाजिक सञ्जालमा डा. केसीको समर्थन र बिरोधमा कैयन कुरा छन् । म कसैलाई उनको समर्थन गर पनि भन्दिन न त बिरोध नै । समाजिक सञ्जाल आफ्नो बुद्धि विवेकको स्तर अनुसार सबैले स्वतन्त्ररुपमा अभिव्यक्ति दिन पाउछन् । यसको चार्म नै यहि हो । मनका कुरा पोख्ने ठाँउ हो फेसबुक, ट्विटर आदि । मात्र मनका कुरा, तपाईका कुरा, मेरा कुरा, तपाईलाई लागेका कुरा, मलाई लागेका कुरा । यि कुराहरुमा तपाई सरकार समर्थक वा काँग्रेस समर्थक वा अन्य कुनै गन्ध आउनु भएन । वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुनु पर्यो । नेपाली माटोको गन्ध हुनु पर्यो ।
फेसबुकका केही उदाहरण लिउ । एकजनाले लेखे, मनमोहन अधिकारीको नाममा मेडिकल कलेज खोलिनु हुदैन । त्यसको काउन्टरमा अर्कोले विपि कोईरालाका नामका ४/५ वटा मेडिकल कलेज अस्पतालको लिस्ट दिए र लेखे काँग्रेसले आफ्ना नेताको नाममा यति कलेज अस्पताल खोल्न हुने हामीले किन नहुने ? म यस्तै फेसबुक पोस्ट हेर्दै थिए । एउटा अनलाईनको फेसबुक पेजमा टुपलुक्क एउटा समाचार आयो । प्रधानमन्त्री केपि ओली भन्दै थिए, मेडिकल कलेज स्थापना सम्वन्धि विद्येयक रोकिन्न । नेपाली काँग्रेसले सदनमा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको रहेछ । अर्को दिन ओली गर्जेछन्् दुई चारजना ठिंग उभिदैनमा विद्येयक रोकिदैन । मैले बुझिन ति ठिंग उभिने दुई चारजना को होलान ? अवस्य पनि सार्वभौम संसदका सांसद । मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति सार्वभौम संसदको मानहानी हो । उभिने सांसद जुन दलको भएपनि सरकार प्रमुखको कुसीमा बसेर संसदीय प्रक्रियामा मै हिलो छाप्ने अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ? जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने कुरा यहि हो ?
यसैबीच, भक्तपुरमा बढीले विध्वंस मच्चायो । कैयनले प्रधानमन्त्री ओलीको मजाक पनि उडाए । ठिमीको बाढीमा डेबेका बस, टर्क, कार अनि बाढीमाथि तैरदै पानीजहाज । नेपालमा एक दुई वर्षभीत्र पानीजहाज चलाउने सपना ओलीको हो । यस्तै चीनबाट लुम्बिनीसम्म रेल लैजाने । सपना देख्नु नराम्रो होईन । राजनीतिज्ञ स्वप्नद्रस्टा हुनुपर्छ । तर, यस्ता सपनाको गुड्डी हाक्नु अगाडि विद्यामान समस्या समाधान गर्ने आँट पनि हुनुपर्छ । समाधान गरेर देखाउनु पर्छ । ओली यहि निर चुके र मजाकको पात्र बने ।
बाहिर जिल्लाको कुरा छाडौं राजधानी काठमाडौंको मात्र सडक, ढल, बिजुली, टेलिफोनको राम्रो व्यवस्थापन गरे के काँग्रेस, के राप्रपा सबैले जय जयकार गर्थे । आमनेपालीको मनमा बस्थे । सपना देखाउने, तुक्का छाटने तर धरातलीय यर्थायमा कहिल्यै नउभिने उनको बानीले मजाक निम्त्याएको हो । यसको दोषी जनता होईन उनी आफै हुन । पद अनुसारको संस्कार लिन नसक्नु उनको कमजोरी हो । वर्तमानलाई चटक्क छाडेर भविष्य कसैले हेर्दैन । मान्छे वर्तमानमा बाँच्छ वर्तमानप्रति उसको चिन्ता स्वभाविक हो । चाहे त्यो काँग्रेस हो, कम्युनिस्ट वा अरु कोही ।
कम्युनिस्ट र तानाशाह मिडिया प्रोपोगण्डामा माहिर हुन्छन । नेपाली मिडिया मात्र होईन सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरमा पनि ओली सरकारको हात हालेको छ । डा. केसीको समर्थनमा फेसबुकमा आउने सबै पोस्टमा बिरोधका स्वर आउने गर्छन र हरेक पोस्टमा विरोध गर्नेहरु दोहरिन्छन् । समाजिक मिडियामा सरकारले बाँदर सेना छाडेको छ । उनीहरु हरेक पोस्टमा बितन्ड मच्चाउछन् । सञ्चारमन्त्रीको केही साता अगाडिको भाईरल टेलिफोन यसलाई पुस्टी गर्छ । मिडियामा सरकारका अन्धभक्त पत्रकार छन् भने समाजिक सञ्जालमा बाँदर सेना ।
म डा. केसी होईन । पहिलो कुरा मसंग दर्जनौ पटक अनशन गर्ने शक्ति छैन । दोस्रो कुरा हरेक पटक अनशन तोड तिमीले भनेको कुरा दिन्छु भन्ने र नदिने सरकारसंग फेरी माग्न जान म सक्दिन । म यस्तो कदापी गर्ने थिएन किनकी म मा त्यो त्याग छैन । बरु म १७ हजारको ज्यान लिएर सत्तामा पुगेको माओवादी जस्तो मैमक्त हुन्थे डा. केसी कदापी हुन्थेन ।
अनाहकमा म किन मर्ने ? चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली गर्ने सरकारसंग म उसैको भाषामा किन नबोल्ने ? म भीत्रको यो आक्रोससंग डा. केसीको अनशनको कुनै मेल छैन, त्यसैले म डा. केसी होईन । तर, म गुण्डा राज, माफिया राज समाप्त हुनुपर्छ भन्ने नेपाली हुँ । एक आम नेपाली । म जस्तै लाखौं नेपाली डा. केसी नभएपनि विधीको शासन चाहेका छन् । म उनीहरुको प्रतिनिधी पात्र भने हुँ । यस अर्थमा म मात्र यस अर्थमा म डा. केसी हुँ । मेरो आवाज गंगामायाको आवाज हो, १७ हजार निर्दोषको आवाज हो अनि तीन करोड नेपालीको आवाज हो जो परिवर्तन चाहन्छन, विकास चाहन्छन र विधीको शासन चाहन्छन । यि चाहना डा. केसीसंग मिल्नु संयोग होईन गुण्डा राज, माफिया राजको परिणाम हो ।